Webtorrent desktop: chishandiso chakanakisa chekushambadzira mafaira erukova | Linux Vakapindwa muropa
WebTorrent inonyatsotsanangurwa seBitTorrent mutengi wewebhu. Iyo inobvumidza vanhu kugovana mafaera zvakananga kubva kubhurawuza ravo, pasina kukosha kwekugadzirisa kana kuisa chero software yekuwedzera.
Iye zvino WebTorrent Desktop yasvika, ichipa isingaremi asi iine hupfumi hwekushambadzira ruzivo uye inogadziriswa paWindows, Linux uye Mac.
Mazuva ese, mamirioni evashandisi veinternet vanoshandisa desktop-based BitTorrent mutengi kurodha pasi uye kugovana zveseKubva pane zvinyorwa, zvinoratidzwa paTV, tutorials, mabhuku kune ekupedzisira Linux distributions.
Kuchinjana kwemultimedia zvemukati zvinowanikwa pamusoro pezvose nekushandisa kwe desktop desktop seTorrent, BitTorrent, qBittorrent kana Transmission.
WebTorrent mutengi weBitTorrent wewebhu. Panzvimbo pekushandisa yakamira yega maapplication senge ataurwa pamusoro izvo inobvumira vanhu kugovana mafaera zvakananga kubva kubhurawuza ravo, vasina kana kumisikidza chero software yekuwedzera.
WebTorrent Desktop ndeimwe nzira kune inopokana Nguva yePopCorn. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti utarise kuyerera nzizi apo ivo vari kurodha pasi.
Asi kusiyana neyekupedzisira, haina kusanganisira katarogu yemafirimu epirati uye nhepfenyuro dzeTV, uye nekudaro zviri pamutemo zviri pamutemo.
Ndezvevaya vane yakanaka internet yekubatanidza, asi havadi kumirira iyo faira kuti izere kurodha pasi
Izvo zvakanaka kune isingafungidzirwe musangano. Zvichienderana neyako yekumhanyisa mhanyisa, unogona kutanga kutarisa mumasekondi kana maminetsi mazhinji.
Unogona kukanda kuApple TV, Chromecast, kana DLNA TV.
Iyo software inongowanikwa muChirungu, asi maficha ayo akaganhurirwa zvakakwana kuti hachisi chinhu chikuru.
1 Maitiro ekuisa WebTorrent Desktop pane Linux?
2 Mashandisiro ekushandisa WebTorrent Desktop?
Maitiro ekuisa WebTorrent Desktop pane Linux?
Kana iri avo vari vashandisi veDebian, Ubuntu, Linux Mint kana chero kugoverwa kunobva pane izvi.
Unogona kudhawunirodha pasuru inoenderana neyako dhizaini yekuvaka.
Kana vari vashandisi ve 64-bit masisitimu anofanirwa kurodha pasi inotevera package ne:
Panguva yeavo vari 32-bit system vashandisi kurodha pasi:
Kuisa iyo inotorwa pasuru, ingo mhanya:
Kana vari Arch Linux nevashandisi vanowana vanogona kuisa iyo application kubva kuAUR nemirairo inotevera:
Para zvimwe zvese 64-bit Linux zvakagoverwa zvinogona kurodha pasi iyo zip faira ne:
Uye nokuda 32-bit masisitimu:
Solo Ivo vanofanirwa kusunungura dhairekitori uye voisa iyo faira iri mukati mefaira:
Mashandisiro ekushandisa WebTorrent Desktop?
Chaizvoizvo vari voga zvinokwana kuvhura iyo application muhurongwa uye nerubatsiro rweiyo rwizi faira yaunowana mune network, iwe unofanirwa kuwedzera kuchirongwa kana kungoteedzera nekunamatira magineti chinongedzo uye mune imwe nyaya yemasekondi iyo application ichakubvumidza iwe kuona iyo torrent faira, kana iri multimedia faira.
Iyo yakasarudzika yakakosha yakavakirwa-mukati mutambi, asi ine zvese zvinodiwa kudzora kufamba mukati mevhidhiyo. Apa ndipo pane WebTorrent Desktop inopfuura.
Kunyangwe pasina iro rese vhidhiyo faira kurodhaunisirwa zvinokwanisika kusvetuka kubva kune rimwe divi renguva yenguvaIine DMT, ichatsvaga zvidimbu zvinoenderana zvefaira rekuda kuberekesa zvingangoita pakarepo.
Izvi zvinopinda mumaminetsi ekupedzisira emuvhi kana mutambo wemitambo, semuenzaniso. (Ehe, izvi zvese zvinoenderana nezve kubatana kwako kunetiweki).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Webtorrent desktop: chishandiso chakanakisa chekushambadzira mafaira erukova